Fanodinkodinam-bolan’ny CUA : Efa mamarana ny fanadihadiana ny Bianco -
AccueilRaharaham-pirenenaFanodinkodinam-bolan’ny CUA : Efa mamarana ny fanadihadiana ny Bianco
Fanodinkodinam-bolan’ny CUA : Efa mamarana ny fanadihadiana ny Bianco
18/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Araka ny efa fantatra sy notaterina an-gazety teto, dia nametraka fitoriana mahakasika ny fanodinkodinam-bola sy ny fitantanana tsy mazava eo anivon’ny Kaomina Antananarivo Renivohitra (CUA) ny mpanolotsaina monisipaly, Lalatiana Ravololomanana, ny 30 jolay 2017. Tsy nandrenesam-peo mahakasika izany ny teo anivon’ny Bianco raha tsy herintaona aty aoriana.
Raha nanontaniana mahakasika io fitoriana io indrindra ny tale jeneralin’ny Bianco, Jean-Louis Andrimifidy, dia nanambara fa raharaha telo no hiandraiketan’ny Bianco mahakasika ny fitoriana napetraky ny mpanolotsaina monisipaly, Lalatiana Ravololomanana, ary efa mamaramparana ny fanadihadiana izy ireo amin’izao fotoana izao. Tetsy andaniny anefa, voalaza fa mizara roa ny raharaha ka ny eny anivon’ny Inspection Générale de l’Etat na IGE no mandray an-tanana ny fanadihadiana mahakasika ilay fanodinkodinam-bola teo anivon’ny CUA. “Mahakasika izay indrindra dia navela hanao sy hanatanteraka ny asany aloha ny eo anivon’ny IGE”, hoy ny tale jeneralin’ny Bianco.
Nohamafisin’ity tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly ity fa rehefa tontosa soa aman-tsara ny fanadihadian’ny IGE ka fantatra fa nisy ny fanodinkodinam-bola, dia izy ireo avy eo no mandefa ny dika mitovy ny firaketana ny fanadihadiana eny amin’ny Bianco. Voalaza ihany koa fa ireo raharaha izay tsy raisin’ny IGE kosa, avy hatrany dia ny Bianco no mandray an-tanana azy.
Ankoatra izay, nanamafy ny mpanolotsain’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra fa misy ny fitantanana tsy mazava eo anivon’ny CUA, ka mahatonga ny tsy fahatanterahana ny fanaovan’ny Ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana ny tatitra amin’ny alalan’ny fivoriamben’ny mpanolotsaina monisipaly, izay tokony ho nizotra ny volana marsa lasa teo. Hatramin’izao, hoy hatrany i Lalatiana Ravololomanana, tsy tanteraka izany. “Inona no antony tsy hanatanterahana ny fivoriana ara-potoana izay tokony hanaovan’ny Ben’ny tanàna ireo tatitra rehetra, indrindra ny fitantanam-bola? Misy antony tsy mazava ao, ary izahay efa nahatsapa efa hatry ny ela fa misy ny fanodinkodinam-bola eo anivon’ny CUA. Tsy azo ekena velively izany, ka izay indrindra nahatonga anay nametraka fitoriana teny anivon’ny IGE sy ny Bianco”, hoy i Lalatiana Ravololomanana.
Travel & Leisure dans Fanisam – bahoaka-HATOMBOKA ETO ANALAMANGA SY ANDROY
Mirongatra ny herisetra ara-nofo atao amin’ny vehivavy, izay tsy hanavahana salan-taona, ary matetika miafara amin’ny fahafatesana tato ho ato. Zazavavy, 14 taona, mpianatra amin’ny sekoly tsy miankina iray, no niharan’izany indray omaly, tokony ho tamin’ny ...Tohiny
Lalatiana Ravololomanana : “Fototry ny olana ny HCC sy ny Lalàm-panorenana”
Fara John’s / Rajoelina : Mitovy…mpisandoka !
« Conference souveraine » : Hanapa-kevitra ireo kandidà
scuba diving in ucluelet b.c: Sorry for the huge review, but I'm really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent…